Ny Mpanjifa / mpiara-miasa Factory, Suppliers | Shina Ny Mpanjifa / mpiara-miasa Manufacturers
Purlin Roll fiforonana Machine
ny mpitantana ny 18-10-19
Tamin'ny faha-7 ny volana Aogositra, dia nanondrana ny horonan-taratasy mitafo fanitso forming milina any Kolombia. Tena profesional mpanamboatra ny horonan-taratasy forming milina. Ny mitafo fanitso namorona mampiasa ny horonan-taratasy mikasika removable lamba, izany flexsible kokoa ary tsy hipetraka ny toeram-piasana. Izao no tena malaza ao amin'ny machines.We no ext ...
India-Stainless vy mitafo fanitso horonan-taratasy forming milina
Tamin'ny 10 Oktobra, izahay Stainless vy aondrana iray mitafo fanitso horonan-taratasy forming milina an'i India. Talohan'ny PPGI ara-nofo dia malaza kokoa fa ankehitriny kosa, Stainless vy taratasy dia tsikelikely fanoloana PPGI tontonana. Zavatra tsy mitafo fanitso namorona mampiasa ny horonan-taratasy mikasika removable lamba, izany flexsible kokoa ka tsy hipetraka ...
Vietnam, Roa lahatsoratra horonan-taratasy forming milina
Tamin'ny 9 Oktobra, izahay aondrana horonan-taratasy roa namorona milina any Vietnam. Ireo lahatsoratra roa namorona milina horonan-taratasy manidina isika mampiasa Seara mba tsy mijanona fanapahana, izay miasa amim-pahombiazana hanafaingana ny hafainganam-pandeha sy hanatsara ny vokatra fahombiazana. Ankoatra araka izay hitanao, isika rehetra manao ny vy sandoka mitsangana sy gearbox fiara ...
Arabia-mitafo fanitso forming milina horonan-taratasy sy ny curving milina
Miandrandra ny anjara
ny mpitantana ny 18-03-08
Efa aondrana ny horonan-taratasy namorona milina maro firenena tahaka an'i Aostralia, Rosia, Espaina, Kanada, Bolivia, Peroa sy ny firenena maro hafa. Tena afa-po izy ireo ho an'ny tsara. Tsy ela kokoa fifandraisana fa tsy raharaham-barotra iray-eny. Noho izany, afa-tsy ny milina tsara, dia mandray be cou ...